> Resource> iPhone> Olee wepụ iPhone Ndi ana-akpo ka CSV on PC / Mac
Enwere m ike wepụ iPhone kọntaktị na a CSV faịlụ na kọmputa?
Ga-amasị m wepụ m kọntaktị site na iPhone dị ka a CSV faịlụ. Ọ ga-abụ otu CSV faịlụ na kọntaktị niile, ọ bụghị iche iche kọntaktsị na onye ọ bụla faịlụ. Bụ n'ebe ọ bụla ga-ekwe omume? Biko, ka m mara ya. Daalụ n'ọdịnihu.
Ee, ọ bụ posibile. E nwere ụzọ abụọ n'ihi na ị na wepụ gị iPhone kọntaktị na a CSV faịlụ. The na otu onye bụ wepụ ya si gị iTunes ndabere, na ndị ọzọ bụ ka kpọmkwem wepụ kọntaktsị na gị iPhone. N'ụzọ ọ bụla ị na-ahọrọ, ị ga mma nwere ihe iPhone kọntaktị extractor ngwá ọrụ arụnyere na kọmputa gị na mbụ.
Unu nwere otu? Ị nwere ike m nkwanye ebe a: Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery maka Windows), ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery for Mac), 100% mma na ọkachamara. Ma nsụgharị nke software eme ka i nwee wepụ kọntaktị ma na iPhone ma ọ bụ na iTunes ndabere. Na ole na ole clicks, ị nwere ike nweta a kọntaktị ndepụta na CSV format na PC gị na ma ọ bụ Mac.
Ọzọ, ka na-agbalị iji wepụ iPhone kọntaktị na a CSV faịlụ na Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows). Ọ bụrụ na ị a Mac onye ọrụ, ị pụrụ iji Wondershare Dr.Fone (Mac) ma na-yiri nzọụkwụ dị ka ndị a.
Nkebi nke 2: Wepụ iPhone kọntaktị na CSV si iTunes ndabere
Ka malitere, malite usoro ihe omume na jikọọ na gị iPhone na kọmputa, mgbe ị na-ahọrọ na-wepụ kọntaktị kpọmkwem site iPhone ka CSV.
Step1. Jikọọ na ike iṅomi gị iPhone 5 / 4S / 4 / 3GS
Tupu ịgụ isiokwu na kọntaktị na gị iPhone, i kwesịrị jikọọ gị iPhone na kọmputa.
Ọ bụrụ na ị na-eji iPhone 5 / 4S, na windo nke usoro ihe omume ga-egosi dị ka ndị a mgbe ị jikọọ iPhone: Pịa Malite iṅomi ike iṅomi gị iPhone 5 / 4S.
Ọ bụrụ na ị na-eji iPhone 4 / 3GS, i kwesịrị itinye iPhone si scanning mode site na isoro ntuziaka n'okpuru ike iṅomi ya:
3. Hapụ Ike button na na-na na ịpị Home button ọzọ 15 sekọnd.
Mgbe ihe omume ahụ na-enyocha gị iPhone, ị ga-ahụ na windo n'okpuru.
Step2. Wepụ iPhone kọntaktị na CSV faịlụ
Mgbe iṅomi mpi, niile data na gị iPhone ga-scanned na depụtara na N'ihi akụkọ n'okpuru. Ịnwere ike ihuchalu ha niile otu otu. N'ihi na kọntaktị gị, ị nwere ike nye akara ha na pịa Naghachi na-azọpụta ha na kọmputa gị. Ugbu a, ị na-na na amịpụtara gị iPhone kọntaktị dị ka a CSV faịlụ.
Step1. Họrọ iTunes ndabere ka wepụ
Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ otú a, ị ga-mma nwere synced gị iPhone na iTunes n'ihu. Mgbe na-agba ọsọ usoro ihe omume, ịgbanwee mgbake mode iji naghachi n'aka iTunes ndabere File n'elu, ị ga-enweta na window n'okpuru. Gị niile iTunes ndabere faịlụ ga-akpaghị aka scanned na-egosipụta. Họrọ otu na pịa Malite iṅomi ịnọgide.
Step2. Wepụ iPhone ndabere kọntaktị na CSV
Mgbe Doppler, gị niile data na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ a ga-amịpụtara ma e depụtara ke edemede. Pịa Ndi ana-akpo na ekpe, nke mere na ị ike ihuchalu niile kọntaktị gị ọdịnaya. Akara ndị ị chọrọ na pịa Naghachi na-azọpụta ha na kọmputa gị dị ka a CSV faịlụ.
Esi ọcha iPhone Nchekwa
Olee otú ịrụzi gbawara iPhone ihuenyo